Ubuso boqobo bukaGrace Gaga
I-Lady Gaga yinto ephezulu. Kwaye oku kuyinyaniso. Izambatho ezinxibeleleyo, iimveliso ezenziwe ngenyameko, izigqoko ezingenakucingelwa kunye nama-wigs. Ngaba ufana nobomi kwinqanaba? Ubunjani ubuso bukaBeautiful Gaga obufihla emva kwesiqu se "freak"? Kwiminyaka emibini eyadlulayo kwisikhululo se-Heathrow u-Lady Gaga waba yintlanzi yobundlobongela bakhe: akakwazanga ukuma kwiidada ezinkulu zeqonga kwaye wawa phantsi. Kwavela - umculi wasukuma kwaye engaphendulwanga wahamba phambili. Oku kuthetha ukuba ngaphantsi kweemeko kuya kuba njengabantu bonke. Nangona impilo yakhe incike kuyo. UMnumzane Gaga akazange abe yinto nje yezithixo, kodwa ngokwenene kukhokelela le ntshukumo ye-eccentrics.
Indlela iinkwenkwezi ezibethe ngayo
Xa ehostlini yaseNew York yomculo we-jazz isiNtaliyane uJosef Germanotta ngeliveki waqokelela ezininzi izihlobo, intombi yomnini wayebeka i-cassette i-tape recorder kwitafile yekhofu, kuquka iingoma zikaMichael Jackson kunye nokucula kunye naye. Ngenxa yoko, le ntombazana yayisetyenziswa njenge-microphone spoons, iifoloko kunye neziqwenga zesonka. "Intombi yam iya kuba ngumdlali we-actress! "- waqinisekisa bonke oomntwana oneminyaka engama-6 ubudala, uStephanie, inkwenkwezi yaseDames Gaga. Ngoko ukuba intombazana inokufundela kwisikolo samaKatolika esihloniphekileyo esithi "I-Monastery yeMoya oyiNgcwele" eManhattan, uJoseph washiya umculo waza wathatha ishishini. Amalungu entsapho ayengabantu abazityebi. Ngoko ke, ukuze uStephanie agqoke ngendlela efanayo neontanga zakhe, abazali basebenze ukususela ngo-8 ukuya kwe-8 ntambama. Sekunjalo, abafundi beklasi badibanisa intombazana. UStephanie wayesoloko engumphathi ebusheni bakhe kwaye wayenomdla. Ukususela ebuntwaneni uye wajwayele ukuba abantu abayiqondi. Kodwa uStephanie-Gaga wayekholelwa ukuba uzimisele ukufumana esinye isithuba. Lo bubomi boqobo be-pop diva. Ukususela kwiinkomfa i-star-freak-star yaqala ukulahla kwiSikolo sobugcisa kwiyunivesithi yaseNew York. Ukudlala kwindawo yokudlala yesikolo, apho wayekhanyisa khona indima ka-Anna Andreevna "kuMhloli" kaGogol, wandisa kakhulu ukuzithemba kwakhe. Impumelelo, ukuzimela, abahlobo-abaculi, abaqalayo ukumthanda - uStefanie wayeziva ehlazileyo. Uthatha isigqibo sokuba aqale olunye ubomi, aqeshe indlu kwaye ahambe endlwini.
Ukususela ngoku, uStephanie Germanotta uhlala rhoqo kwii-nightclub. Utshiza izipikili zakhe nge-lacquer ebomvu aze ahambe kwisiteji esikhumba esomileyo. Kodwa ngokukhawuleza uyaqonda: lo mfanekiso awusebenzi. UStephanie ukhangele ngokwakhe-ngexesha leentsebenzo ubeka umgca weenwele, ubeka ingwebhu ye-bikini ene-sparkles, ibambe kwi-orchid wig. Abaphulaphuli bayothuka ngenxa yokuziphatha komculi oneminyaka eli-17 ubudala, kodwa bathanda lo "mntwana wekhwalithi". Ukufunda ukuba uStephanie udlala kwiiklabhu kwenye yeyona ndawo ixakeke kakhulu eNew York, uyise akazange agxininise amehlo akhe. Kodwa akakhathaleli ngoluvo lwabazali - uStephanie unenkululeko. Ngokukhawuleza waqonda ukuba wayengaboni kakubi. Ukhulile, uye wanciphisa kancane kwaye usuke ebhentsheni elibi kwintombazana enentombi. Abazali baphupha elinye ikusasa kumntwana, kodwa wahamba ngokumelene nokuthanda kwabo kwaye bakhetha iyunivesiti umqulu kunye nomsebenzi njengomgcini we-waitress. UStephanie udansa ngobusuku kwiiklabhu eziliqela kwangoko, kuba i-drive iyaqala ukuthatha i-cocaine. Wayengacingi ukuba into ethile yayingalunganga kuye kwada kubahlobo bathi: "Ngaba usebenzisa iziyobisi kuphela? ".
Uthi: "Ngelinye ilanga ubaba wabuyela kwindlu yam. Sasiye kwi-loggerheads kwaye sasinxibelelwano iminyaka emininzi. Wandibonisa ngesibindi, wangithabatha ngesandla wathi: "Mntwana, ibhizinisi lakho libi! Khumbula: xa nje ubomi bakho budibaniswe nale nto , awuyi kuze uphumelele empilweni yakho nakumsebenzi wakho. "
Ukusuka kuStephanie Germanotta - ku-Lady Gaga
Amazwi kaBawo asebenza kuStephanie ngcono kunaliphi na iikhosi zezilwanyana ezingaziwayo kunye nokuqeqesha ngokuzenzekelayo. Wayebanjwe neziyobisi, watshintsha indlu yakhe kunye nabahlobo bakhe, kwaye ngo-2006 waqhelana nomvelisi-uRob Fusari. Wayexabisa iitalente yakhe yokucula kunye nendlela yakhe yokunyuka, njengoFreddie Mercury. URob weza kunye negama lakhe lomnxeba - u-Lady Gaga ngokuhlonipha ingoma ethandwa nguMahokazi "Radio Ga-Ga". UStephanie wayengenomdla, kodwa xa waqala ukufumana "izabelo" zokuqala ezivela kwintsimi, wabuyela ngokuthandana naye kwaye ngoku kaninzi uphinda wathi: "Ubuso obutsha bukaDame Gaga buye buguqula ubomi bam."
Enyanisweni, le nto ntombazana ibalwe yonke into: abantu banomdla kuzo zonke izinto ezingavamile, bakhangwa kwii-freaks, ngoko siya kuphazamiseka kwaye sizuze kuyo! Wayecinga ngayo yonke into - isitayela somsebenzi, umfanekiso, indlela yokuthetha. I-Gaga idibaniswe kunye nesiteji somfanekiso kangangokuba nangobomi obuqhelekileyo akazivumeli ukuba aphume ngaphandle kwemaski. Yonke into yokubonakala kwayo ibonakaliso lokwenene. Umculi uza kwi-cafe kwiingubo zebhaluni, ufike kwi-studio yokurekhoda kwi-imeyile ye-chain, ehlotshiswe ngamacwecwe. Zonke izambatho umculi uza kunye naye kwi-studio yakhe yeHaus of Gaga.
Umculi uye wadala ecaleni kwakhe njengento efihlakeleyo yokuba abantu abambalwa abaye baqonda ukuba ngubani ofihliweyo phantsi kwe-mask of freak. Amahemuhemu asasazelele ukuba ubuso boqobo bukaGrace Gaga bubengumntu oguqulwayo, ngoko ke umntu obesinikwa ngumntu wesini, emva koko u-hermaphrodite. Ngethamsanqa, ama-paparazzi amaxesha amaninzi athatyathwa ngu-Lady Gaga "ngaphandle kwemaski", kwaye wonke umntu wabona umntu othobekileyo, engengomntu okhangayo. Njengoko inkwenkwezi yavuma: "Xa ndivuka ekuseni, ndivakalelwa njengentombazana elula, kodwa ke ndithi kum:" Nguwe Lady Gaga! Ugqoke, uyenze uphinde usebenze! Andizivumeli ukuba ndiphuze amanzi xa umntu esondele. Akukho mntu ungandibona njengomntu oqhelekileyo. " Ngo-Oktobha 2009, u-Lady Gaga wachaza ukuba wenze itekisi yesithoba - ngokuhlonipha uyise, ophumelele ukuhlinzwa ngentliziyo. Umculi ufihla indawo ye tattoo, kodwa uyavuma ukuba yintliziyo, phakathi kwegama elithi "uba". Mhlawumbi, lo bubomi bokwenene bukaStephanie - Lady Gaga, umvukeli othanda intsapho yakhe.
Umhla wokuzalwa komdlali weDikaprio
I-Biography ka-Helena Bonham Carter
UDima Bilan: udliwano-ndlebe
Abadumileyo abanxibe kakhulu
Ukutyikitya kunye nokukhwabanisa: njani ukudala umfanekiso womlumbi weHalloween
Ukutyilisa izityalo kwiimbiza
Ukuzalisekisa onke amaphupha neminqweno kunyaka omtsha
Iimbangela zokulahleka kweentlungu zabasetyhini
Isobho lomama ngeengxube
Ukutya okulungileyo koNyaka omtsha
Isobho se-kroti kunye neerari
Iresiphi elula ye-truffle
Iingcali zemithi zonyango
Ikhukhi kunye ne-chocolate kunye ne-vanilla
Kwakuyiphupha lokuba indlu yakho iphangwa. Ukutolika Okudumile